Ukukhiqizwa kwe-Ultrasonic kweSano Nanoemulsions - I-Hielscher Ultrasound Technology
Ama-nanoemulsions – eyaziwa nangokuthi miniemulsions noma i-submicron emulsions – lisetshenziswe ezinhlobonhlobo zezicelo ekhemistry, amapende & ukugqoka, izimonyo, izidakamizwa nokudla.
Izindlela ze-ultrasonic ziyaziwa njengamathuluzi athembekile ekukhiqizeni ama-nanoemulsions ahlala isikhathi eside.
Ukubunjwa kwe-Ultrasonic ye-Nanoemulsions
I-ultrasonic emulsification ibangelwa ukuhlanganisa amagagasi amandla amandla i-ultrasound ibe uhlelo lwe-liquid. Ngokufaka i-liquid liquid, izindlela ezimbili zenzeka: (1) Insimu ye-acoustic ikhiqiza amagagasi ahamba phakathi ketshezi futhi abangele ama-microturbulences kanye nokunyakaza kwe-interfacial. Ngaleyo ndlela, isigaba somngcele siyaqina, ukuze isigaba esiphakathi (esingaphakathi) siphume futhi senze amaconsi ekugcineni (yangaphandle) isigaba. (2) Ukusetshenziswa kwamagremu aphansi, amandla aphakeme e-ultrasonics akhiqiza i-cavitation (Kentish et al. 2008). Ngama-cavitation e-ultrasonic, ama-microbubbles noma ama-voids akhiwa ngaphakathi ngenxa yemigudu yokucindezela ye-wave ultrasound. I-microbubbles / voids ikhula ngaphezu kwemijikelezo eminingana yegagasi kuze kube yilapho iwa phansi ngesihluku. Le-bubble implosion ibangela izimo ezimbi kakhulu zendawo ezifana ne-shear ephezulu kakhulu, ama-jets e-liquid, nokushisa okukhulu kanye namazinga okupholisa (Suslick 1999). Lezi zinhlobo ezidlulayo ziphula amaconsi amancane aphansi (yangaphakathi) isigaba kuze kube se-nanosize droplet bese uwaxuba ngokuzenzakalelayo esigabeni esilandelayo (sangaphandle).
Funda kabanzi mayelana ne-cavitation ye-ultrasonic!
Lipid miniemulsions – okhiqizwa yi-ultrasonics – ziyasetshenziswa kabanzi njengenkampani yezinsizakalo zamakhemikhali ezemithi ekwenzeni imithi. Isibonelo, i-miniemulsions ingaba njengendlela yokuphatha izidakamizwa zesibhedlela noma izidakamizwa zokudiliza izidakamizwa ukukhomba amathishu. Ngaphandle kokutholakala okuphezulu kwamakhemikhali asebenzayo, izinzuzo ze-miniemulsions zisezingeni eliphezulu lokuzibandakanya, ukuhlaziywa kwemvelo, ukuzinza, nokukhululeka kokukhiqizwa okukhulu. Ngenxa yezindawo zabo zokwakha, bangakwazi ukufaka ama-molecule we-hydrophobic kanye nama-amphipathic. I-nanoemulsions e-Ultrasonically elungiselelwe iye yalayishwa nge-tocopherols, amavithamini, i-curcurmin nezinye izinto eziningi zemithi.
Izinhlelo ze-ultrasonic zikaHielscher ziyi-emulsifiers ezinokwethenjelwa ekulungiseleleni izidakamizwa ezithwala izidakamizwa. Ukuze i-emulsification ye-ultrasonic, i-Hielscher inikeza izesekeli ezihlukahlukene ukuthuthukisa inqubo yokumisa. Hielscher's MultiPhaseCavitator i-add-on eyingqayizivele yamaseli egeleza we-ultrasonic, lapho isigaba sesibili sijojowe njengomfudlana omncane kakhulu ngqo kwi-ultrasonic “indawo eshisayo” we-emulsification.
Ama-nanoemulsions anikeza izinzuzo ezihlukahlukene ekuqalisweni kwemikhiqizo yokudla. Ukuguquka kwemvelo kubonisa ukuzinza okuhle kokuhlukanisa, ukuqubuzana, ukuguquka, nokuhlinzeka ngokukhululeka kanye / noma ukukhipha izithako ezisebenzayo ngenxa yobukhulu babo besinxele kanye nensiza enkulu. Ukwengeza, banikeza ukutholakala okuphezulu kwamakhemikhali asebenzayo okubalulekile ekunikezeni izakhi kanye nezinto ezisebenzayo. Ngaphezu kwalokho, zinikeza izakhiwo ezinhle zokukhiqiza ngoba zibonakala zibala noma zibonakala ziguquguqukile futhi amaconsi amancane azoba nesibhakabhaka futhi ahlanzekile. Ngakho-ke, ukukhiqizwa kwe-nano-emulsions okuyimpumelelo kuwumsebenzi wonke wokudla embonini yokudla, isb ukwenza amavithamini noma amafutha e-fatty acid (isib. Vithamini C, i-vitamin E omega-3, i-omega-6, i-omega-9 etholakala embewu yezitshalo noma amafutha wezinhlanzi) noma ukukhiqiza imikhiqizo enhle (isib. ngamafutha abalulekile).
Ama-nanoemulsions ikakhulukazi amanzi-in-oil (W / O) anikeza izinzuzo ezihlukahlukene zokufakelwa kwezinto eziphilayo ze-bioactive hydrophilic zibe ngamaconsile ama-nanoscale (emkhathini owodwa noma kabili).
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokwakhiwa kwama-emulsions okuzithokozisa nge-ultrafactant ngaphandle kwama-ultrasonics!
Ultrasonically basizwa miniemulsion polymerization isetshenziswa izinqubo ezehlukene – kusukela encapsulation yezinhlayiya ezingenangqamuzana kuya kokuqala kwezinhlayiya ze-latex. Ukusetshenziswa kwamandla ultrasound ekuphenduleni kwamakhemikhali njengama polymerization, synthesis njll kuthiwa yi-sonochemistry.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana Sonochemistry, the synthesis ultrasonic of latex futhi i ukushisa kwe-ultrasonic!
I-ultrasonic emulsifier UIP1500hdT (1500W)
Yize ezinye izingcingo zingaba eshalofini zizinze ngaphandle kokusebenzisa noma yiphi i-survivant noma i-emulsifiers ngenxa yobukhulu nokusatshalaliswa kwe-nano-scoplet, amanye ama-nanoemulsions adinga ukusetshenziswa kwama-ejenti wokuqinisa ukuthola uzinzo lwesikhathi eside nekhwalithi ephezulu yomkhiqizo. Ukuqiniswa kungenziwa ngokufaka noma ama-survivants (amashumi) noma izinhlayiya eziqinile ezisebenza njengabazinza. Ama-emulsions, aqiniswa izinhlayiya eziqinile abizwa ngokuthi ama-Pickering emulsions. I-Lactose, i-albhamuin, i-lecithin, i-chitosan, i-cyclodextrin, i-maltodextrin, isitashi njll. Singasetshenziswa njengabasizi be-colloidal ku-Pickering emulsions. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokukhishwa kwe-Pickering ultrasonically!
I-ultrasonic emulsification ingenziwa kuzo zonke izinhlobo ze-emulsions. Uma i-ejenti yokuzinza iyadingeka emululini ethile, ingahlolwa kalula ngesilinganiso esincane.
Sicela uqaphele ukuthi inani lomshini osebenzayo oludingekayo landa ngesayizi ye-droplet kusukela isilinganiso sendawo-kuya-volume (S / V) spheres sinikezwa ngu: S / V = ​​3 / R. Isibonelo, amancane ubukhulu bezinhlayiya noma i-droplet, indawo engaphezulu ihlobene nomthamo wayo.
I-Ultrasonic Emulsification Equipment
Ukukhiqizwa kwe-submicron- ne-nano-emulsions kudinga imishini enamandla ye-ultrasonic. I-Hielscher imishini ye-emulsification ultrasonic inikeza ama-amplitudes aphezulu kakhulu (kufika ku-200μm for Ama-ultrasonicators asezimboni, am amplitudes aphezulu ngokucela) ukudala insimu enkulu ye-acoustic.
Kodwa-ke, ekukhiqizeni ama-nanoemulsions azinzile, imishini yamandla e-ultrasound yedwa ayivami ngokwanele. Ngaphandle kwamandla e-ultrasonic anele, ukulawula okunembile kwemigomo yezinqubo, nezinsimbi eziyinkimbinkimbi (njenge-sonotrodes, i-flow cell reactors, ukupholisa) kudingekile ukuthola amaconsi amancane nendawo yokuhlakazeka okufanayo kokubili, isigaba se-aqueous and oil komunye nomunye.
Ukukhiqiza ama-emulsions aphakeme, amaprosesa anamandla e-Hielscher ahlanganiswe ne- MultiPhaseCavitator ikunika i-hardware enhle.
I-Hielscher Ultrasonics ikhethekile ekuhlinzekeni izinhlelo eziphakeme ze-ultrasonic nezesekeli zokuthola imiphumela emihle yokucubungula. Okuhlangenwe nakho kwethu kwesikhashana ekusetshenzisweni kwe-ultrasonic nokubambisana kwethu eduze namakhasimende ethu kuqinisekisa ukuqaliswa ngempumelelo kwe-ultrasonics emigqeni yokukhiqiza.
Ekuhlolweni kokuqala, ukuthuthukiswa kwenqubo nokusebenza kahle kwenqubo, sinikeza ukuhlonywa ngokugcwele inqubo yebhu lab kanye nesikhungo sobuchwepheshe.
Ngaphezu kwalokho, sinikeza ngokujulile Ukubonisana, ukuthuthukiswa izinhlelo ezihlelwe nge-ultrasonic futhi ejulile isevisi yobuchwepheshe ukufakwa, ukuqeqeshwa nokugcinwa.
I-Kentish, i-S.; Wooster, T .; Ashokkumar, M .; Simons, L. (2008): Ukusetshenziswa kwe-ultrasonics yokulungiselela ukuguqulwa kwe-nanoemulsion. Isayensi Yezokudla Engenayo & Emerging Technologies 9 (2): 170-175.
Suslick, KS (1999): Ukusetshenziswa kwe-Ultrasound kuya kuMathemikhali Okusebenzayo. Annu. IsAm. Mater. Sci. 1999. 29: 295-326.
Emulsions ichazwa njengama-liquids amabili angabonakali: Omunye wamanzi – lokho okuthiwa isigaba esasakazekile noma sangaphakathi – isakazeka njengamaconsi amacimbi ngaphakathi kolunye uketshezi, owaziwa ngokuthi isigaba esiqhubekayo noma sangaphandle. Iziphuzo ezivelele kakhulu ezisetshenziselwa ukwakha i-emulsion ngamafutha namanzi. Uma isigaba samafutha sichithwa esigabeni samanzi / aqueous, uhlelo luyi-emulsion yamafutha-emanzini, kanti lapho isigaba samanzi / i-aqueous sichithwa esigabeni samafutha, kuyimvelo emanzini yamanzi. Ama-emulsions ahlukaniswa ngokulandelana ngobukhulu bawo bezinhlayiya kanye nokuzinza kwe-thermodynamic njenge-macroemulsions, i-microemulsions, ne-nanoemulsions, ngokulandelana.
Amapulangwe angama-nanoparticulate dispersions, ahlanganisa amaconsi amancane. Amandla amakhulu e-shear of power ultrasound adiliza ama-droplets ukuze ancishiswe abe yi-submicron no-nano ububanzi. Ngokuvamile, amanani amancane we-droplet aholela ekuzinzeni okukhulu kwe-emulsion. Izinkanyezi zingahlukaniswa njenge-O / W (amafutha-ngamanzi), i-W / O (amanzi-in-amafutha) noma njenge-emulsions amaningi / kabili njenge-W / O / W ne-O / W / O. I-nanoemulsion ivulekile noma iguquguquke (ku-spectrum ebonakalayo) kuye ngokuthi ubukhulu be-droplet ne-droplet. Ngokuvamile ama-nanoemulsions achazwa usayizi we-droplet phakathi kuka-20 no-200nm. Njengoba usayizi we-droplet wehla, ukuqhuma kwe-emulsion ye-coalescence kunciphisa (kunciphisa ukuvuthwa kwe-Ostwald).
Ama-nanomaterials kanye nama-nanoemulsions abonakala ngezakhiwo ezibonakalayo ezihluke kwi-microemulsions. Izinhlayiya ze-nano-size zibonisa izakhiwo ezingafani ngokuphelele noma izakhiwo zabo ezijwayelekile zivezwa ngendlela efingqiwe kakhulu. Ukubukeka okubonakalayo kwe-nanoemulsions kubonakala ngendlela ehlukile kune-emulsions micron-size kusukela amaconsi amancane kakhulu ukuphazamisa ama-wavevel optical of spectrum ebonakalayo. Ngakho-ke ama-nanoemulsions abonisa ukusabalalisa okuncane kakhulu futhi avele ebonakalayo noma ehamba ngokubonakalayo.
Usayizi we-droplet we-emulsion uphonywe ukwakheka kwesigaba samafutha, izakhiwo ze-interfacial kanye ne-viscosity zombili, izigaba eziqhubekayo nezihlakazekayo, uhlobo lwe-emulsifier / i-surfactant, isilinganiso se-shear ngesikhathi sokumiswa kwe-emulsification, kanye nesimo se-solubility yesigaba samafutha emanzini.
Ama-nanoemulsions asetshenziswa kakhulu kwizicelo ezihlukahlukene ezifana nokulethwa kwezidakamizwa, ukudla & iziphuzo, izimonyo, izidakamizwa, nesayensi yezinto ezibonakalayo & synthesis.
Ama-emulsifiers ayisici esibalulekile sokulungisa imulsion / nanoemulsion ezinzile. Ama-emulsifiers angama-agent asebenzayo aphezulu awenza ungqimba oluvikelayo mayelana ne-droplet futhi unciphise ukungezwani kwe-interfacial, ngaleyo ndlela avimbele ukuvuthwa kwe-Ostwald, ukuqubuzana nokugcoba.
Amakhemikhali amancane amancane: I-non-ionic emulsifier efana ne-Tween ne-Span ibonisa ukucola okuphansi nokucasula lapho ilawulwa ngomlomo, ngesineke nangesidlangalaleni ngakho-ke ikhetha ngaphezu kwama-emulsifiers ionic. I-Tween ne-Span yizona ezizikhethela ukuqiniswa kwe-emulsion ekwenzeni embonini yokudla, imithi kanye ne-cosmectic.
Tweens: I-Tween 20/60/80 yabizwa ngokuthi i-polysorbate 20/60/80 (PEG-20 i-sorbierite monolaurate, i-PEG-20 e-sorbierite monostearate, i-polyoxyethylene sorbitan monooleate). Ziyi-surfactants / i-emulsifiers engeyona i-nonion etholakala ku-sorbitol. Zichitha kalula emanzini, ethanol, methanol noma i-ethyl acetate, kodwa kancane kancane emafutheni amaminerali.
I-Spans: I-Span20 / 40/60/80 yi-sorbitan fatty acid esters / sorbitan esters, okuyizinto eziqhamukayo ezingezona i-ionic ezinezindawo zokuxubha, ukuhlakaza, nokuhlanza. Ama-surfactants ama-span akhiqizwa yi-déshydration ye-sorbitol.
I-Phospholipids: i-yolk, i-soy or i-lecithin yobisi
Amaprotheni ama-Amphiphilic: I-Whey protein yodwa, i-caseinate
I-polysaccharides yama-amphiphilic: i-gum arabic, i-starches eguquliwe